Sunday September 28, 2014 - 08:01:42 in Wararka by Super Admin
Xog Hoose oo ay heshay Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa sheegeysa in ciidamada Itoobiya qasaare lixaadleh lagu gaarsiiyey dagaal culus oo laba maalin ka hor degmada Ceelgaras ku dhexmaray Mujaahidiinta iyo cadowga Alle, Iyadoona faafaahino dheeraad a
Xog Hoose oo ay heshay Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa sheegeysa in ciidamada Itoobiya qasaare lixaadleh lagu gaarsiiyey dagaal culus oo laba maalin ka hor degmada Ceelgaras ku dhexmaray Mujaahidiinta iyo cadowga Alle, Iyadoona faafaahino dheeraad ah oo soo baxaya ay sheegayaan in qasaaraha uu sii kordhay.
Ilo Wareedyo Xog-Ogaal ah oo si hoose ula hadlay Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa xaqiijiyey in ugu Yaraan 25 Askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya lagu dilay dagaalkii maalin ka hor Mujaahidiinta iyo Xabashida ku dhexmaray afaafka degmada Ceelgaras ee Wilaayada Galgaduud, Iyadoona dhaawacyo intaas ka badan laga daadgureeyey degmadaasi.
Diyaarad Hilicopter ah oo Khamiistii soo caga-dhigatay degmada Ceel-garas ayaa halkaas ka daadgureysay in ka badan 30 askari oo qaba dhaawacyo kala duwan, Waxaana loo daadgureeyey dhanka degmada Dhuusamareeb sida ay noo sheegeen Ilo Wareedyadeena.
Xogta aan helnay ayaa sidoo kale tilmaameysa in meydadka ilaa 25 Askari oo Itoobiyaan ah lagu Keydiyey Container (Konteenar) kuwaas oo weli Yaalla degmada Ceel-Garas, Waxaana la filayaa in halkaas laga qaado, loona gudbiyo gudaha Itoobiya.
Ilo Wareedyada ayaa sidoo kale noo sheegay in qasaaruhu uu intaas ka badan karo, ayna jiraan ciidamo la la’yahay nolol iyo geeri, kuwaas oo loo maleynayo in meydadkooda looga soo cararay dhulkii howdka ahaa ee lagu dagaalamay.
Ciidamada Mujaahidiinta Jabhadda Wilaayada Galgaduud ayaa horay u sheegay in ay arkeen Meydadka Ciidamo badan oo Itoobiyaan ah kuwaas oo uu ku jiray Sarkaal sare oo hubkiisii iyo warqadihiisii aqoonsiga ay Mujaahidiintu ka soo furteen.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa qeylo dhaan Afka furtay ka dib markii ay la kulmeen jugtaas, Waxayna u qeylo dhaansadeen dhanka Degmada Ceelbuur halkaas oo Maalintii shaley uu kaga yimid kolonyo gurmad ah oo dabaabaad iyo gawaari gaashaaman u badnaa balse lama filayo in abaabulkaas uu cadowga ka yareeyo darabaadka ay kala kulmayaan Mujaahidiinta.